Global Voices teny Malagasy » Kambodza : Halalaka, Tsy Hitongilana, Hivelatra Ny Fifidianana Hoy Ny Governemanta – Fa Zavatra Hafa No Lazain’ny Fiarahamonim-Pirenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jolay 2018 5:19 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Kambodza, Fahalalahàna miteny, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Lahatsary iray  novokarin'ny Sampana momba ny gazety sy ny Tamberina Mailaky ao amin'ny biraon'ny filànkevitry ny Minisitra mihitsy no nieboebo hoe ” heverina ho iray amin'ny fifidianana tsara indrindra eo amin'ny tantaran'ny Kambodza ” ity fifidianana ho avy ity.
Hamafisin'ilay lahatsary aza fa manome lesona momba ny fampiroboroboana ny fandalàna ny fahamaroana ho an'ireo firenena hafa i Kambodza, tamin'ny nanasongadinany fa valo fotsiny no isan'ireo antoko nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2013 . 20 no isan'ny antoko politika voarakitry ny governemanta amin'izao fotoana izao.
Asongadin'ilay lahatsary ihany koa ny fisian'ireo mpanaramaso iraisam-pirenena izay mety hitsidika tsy misy teritery ireo biraom-pifidianana. Nolazain'ny governemanta fa mpanaramaso 50.000 no nasaina  ary mpanao gazety 300 avy amin'ny vondrona 35 no nekena hanatrika ny fifidianana amin'ity taona ity.
Fa tsy nolazain'ilay lahatsary hoe tamin'ny May 2018 dia namoaka fitsipi-pitondràntena ho an'ireo mpanaramaso ny fifidianana ny governemanta, fitsipika izay nolazain'ireo vondron'ny haino aman-jery fa mety manohintohina  ny asan'ny mpanao gazety. Raràn'ilay fitsipika ny mpanao gazety tsy hilaza ny ” heviny manokana na manaratsy” na manao tafatafa tsy nahazoana alàlana any amin'ny biraom-pifidianana.
Ho setrin'ilay fitsipika, dia nilaza  ny Federasiona iraisam-pirenen'ny Mpanao gazety fa ” Manakana ny fahazoan'ireo kambodziana ny mety ho vaovao rehetra ilaina handraisana fanapahankevitra mazava ara-politika ireo torolàlana farany ireo.”
Vondronà fiarahamonim-pirenena maherin'ny 116 any Kambodza no nanao sonia fanambaràna  manakiana ilay prakas, tamin'ny filazàna fa izany dia ” mandrahona ny zon'ny fiainan'ny tena manokana sy ny fahalalahan'ny fanehoankevitr'ireo mpisera mandeha irery amin'ny aterineto sy ny haino aman-jery sosialy any Kambodza no sady mampihena ny erana efa voafetra sisa navela hiadian'ny olona hevitra taorian'ireo volana maro niadiana tamin'ny fahalalahan'ny haino aman-jery ” . Toy izao no vakin'ilay fanambaràna :
Ankoatry ny fanenjehana ny mpanohitra, dia voaheloka ho nanozongozona ny fahalalahan'ny fanehoankevitra ihany koa ny governemanta Hun Sen taorian'ny nanomezany baiko ny hiampangàna ny  foiben'ny onjampeo ao an-toerana sy ireo gazety izay tena mpanakiana ny antoko eo amin'ny fitondràna noho ny tsy fandoavan'ireo hetra  .
Ireo fanenjehana ireo no nahatonga ny fanjavonan'ireo gazety roa hany tsy miankina teto amin'ny firenena – ny The Phnom Pehn Post sy ny The Cambodia Daily. Taorian'ny nandraisany ny taratasin-ketra midangana, dia nitsahatra  tamin'ny asany ny Daily tamin'ny Septambra 2017, ny gazety  kosa dia namidin'ny  tompon'ny Post tamin'ny fikambanana misahana ny fifandraisana miasa ho an'ny governemanta.
Tamin'ny fandraisam-pitenenana teo anatrehan'ny Firenena Mikambana tamin'ny faran'ny volana Jona 2018, dia nofintinin'ny  Vaomiera Iraisam-pirenenan'ny Mpitsara ny fanakianan'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona momba ny fitontongan'ny demokrasia any Kambodza :
Ito ambany ito ny lahatsary  manontolon'ny Sampana momba ny gazety sy ny Tamberina Mailaky ao amin'ny biraon'ny filànkevitry ny Minisitra :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/19/122319/
 Lahatsary iray : http://pressocm.gov.kh/en/archives/31167
 hiampangàna ny : https://globalvoices.org/2017/09/06/cambodia-daily-closes-down-after-government-threatened-it-with-hefty-tax-bill/